Fikasana maimaimpoana hatao any Copenhagen | Vaovao momba ny dia
Fikasana maimaimpoana hatao any Copenhagen
Maria | | Copenhague, Fialantsasatra any Eropa
Isika rehetra dia te-hitsangatsangana, indrindra raha manao izany isika dia mahavita manangona vola satria indraindray mety lafo ity fahafinaretana ity: ny tapakilan'ny fiaramanidina, ny fijanonana amin'ny hotely, ny fidirana mankamin'ny fizahan-tany mpizahatany, misakafo any ivelany, mividy fahatsiarovana ho an'ny namantsika sy ny fianakaviantsika. ... Soa ihany fa amin'ny tanàn-dehibe rehetra, misy hetsika maimaim-poana hatao mba hankafizanao ny dia nefa tsy mandany euro. Izany no tranga tany Copenhagen, any Danemark.
1 Tolakandro ara-kolotsaina ao amin'ny tranombakoka SMK
2 Zaridaina Botanika Copenhagen
3 Copenhagen amin'ny bisikileta
4 Kaonseritra ao amin'ny Royal Danish Opera
5 Fetibe fahavaratra
6 Fanovana ny mpiambina
Tolakandro ara-kolotsaina ao amin'ny tranombakoka SMK
Ny Museum Museum ao Copenhagen, fantatra ihany koa amin'ny Statens Museum for Kunst, dia galeram-pirenen'i Danemark. Izy io dia toerana be soso-kevitra indrindra handehanana amin'ny sanganasa sy ny maritrano. Ho fanampin'izany, maimaim-poana ny fidirana amin'ny talata mba hahafahanao mankafy ny fanangonana maharitra azy nefa tsy mandany satro-boninahitra.
Mety ihany koa ny mitandrina amin'ireo hetsika hafa atolotry ny tranombakoka SMK ho antsika. Miankina amin'ny vanim-potoana, andro vitsivitsy dia lasa toerana lehibe ho an'ny hetsika sy ny fety misokatra ho an'ny besinimaro ny galeran'ny zavakanto miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana an'i Copenhagen avy eo amin'ny terrasiny.
Ny vidin'ny tapakila hatramin'ny Jona 2016 dia 110 DKK. Na izany aza, mamporisika ny fividianana ny Kaonty Copenhagen ianao satria afaka mitsidika toerana mahaliana sy mampiasa fitateram-bahoaka fa tsy manahy momba ny tapakila sy ny vidiny.
Zaridaina Botanika Copenhagen
Any akaikin'ny Lapan'ny Rosenborg sy ny Station Norreport, ny Copenhagen Botanical Garden dia misy ny zava-maniry lehibe indrindra any Danemark. Ny zaridainany dia fonenan'ny karazan-javamaniry danoà 600 mahery ary hazo iray nanomboka tamin'ny 1806. Ho fanampin'izany, izy ireo dia ampahany amin'ny Museum History Natural any Danemark ary tantanan'ny University of Copenhagen.
Ny Botanical Garden dia nisy hatramin'ny 1870 ary misy 10 hektara izay ampiasaina amin'ny fanabeazana na amin'ny siansa, ary koa toerana fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra na fialofana amin'ny ririnina. Ny afovoany dia sarotra amin'ny trano fitaratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay ampiasaina ho trano fiompiana hamboly ny zava-drehetra manomboka amin'ny zavamaniry arctic ka hatramin'ny cacti, succulents na orkide.
Mba hivezivezena manodidina ny zaridaina, araho ireo lalana tsara marika. Ny zaridaina tsirairay dia voarindra amin'ny karazan-javamaniry ary misy ny anarana amin'ny teny latina ary koa ny danoà. Maimaimpoana ny fidirana ao amin'ny Copenhagen Botanical Garden ary azo tsidihina isan'andro, ny Mey ka hatramin'ny septambra ary mihidy amin'ny Alatsinainy mandritra ny taona sisa.
Copenhagen amin'ny bisikileta
Ny renivohitra Danoa dia natao hitan'ny bisikileta. Copenhagen dia manana lalan-bisikileta milamina 350 km azo sarahina amin'ny arabe mahazatra mba hahafahanao mankafy mandehandeha mamaky ny tanàna na mahatratra haingana ny moron-dranomasina, ala ary zava-manintona hafa izay eo amin'ny manodidina.
Mba hahafantarana an'i Copenhagen amin'ny bisikileta, dia tsy mila manofa bisikileta na mitondra bisikileta any ianao. Raiso fotsiny ny iray amin'ireo bisikileta ho an'ny daholobe maimaim-poana eto afovoan-drenivohitra izany dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fametraham-bola 3 euro, izay azo averina rehefa averinao any amin'ireo gara rehetra manerana ny tanàna.
Kaonseritra ao amin'ny Royal Danish Opera
Isan-taona ny Royal Danish Opera dia mikarakara kaonseritra maimaimpoana hankafizanao amin'ny tranobe mahafinaritra an'ny Royal Theatre noforonin'ilay mpanao mari-trano danoà malaza Henning Larsen. Any amin'ny nosy Holmen no misy azy, izay mifandray amin'ny tetezana izay mamela ny fidirana amin'ny Opera amin'ny bisikileta, fiara, bus na mandeha an-tongotra.
Ny Theatre Royal any Copenhagen dia fantatra ihany koa amin'ny famolavolana tsara izay miafina ao anatin'ny rindriny, izay misy haingon-trano tsara tarehy sy akustika mahafinaritra. Afaka mahita sy mandre sanganasa nataon'i Wagner, Shakespeare na Verdi, ankoatry ny hafa. Misy fampisehoana saika isaky ny alina.
Manoro hevitra anao izahay mba hamandrika fitsangatsanganana amin'ny fiteny anglisy hitadiavana ny tantaran'ny trano, eo am-pandehananao ireo dingana marobe ary jereo ao ambadiky ny sehatra. Ho fanampin'izay, ho fantatrao ny lavarangana tsy miankina amin'ny Mpanjakavavin'i Danemark. Ireo fitsidihana ireo dia misy saika isan'andro.
Ny festival amin'ny fahavaratra izay voalamina ao amin'ny seranan-tsambon'ny tanàna Danemarka maro dia fomba fanao amin'ny fahavaratra lavorary ho an'ny fahafinaretana maimaimpoana amin'ny gadona mozika, fampisehoana zavakanto ary orinasa tsara. Hevitra tsara hankafizanao ny fijanonanao any Copenhagen amin'ny fomba hafa raha mikasa ny handeha any ianao mandritra ny fialantsasatra amin'ny fahavaratra.
Fanovana ny mpiambina
Raha Copenhagen no tanjonao, dia manoro hevitra anao izahay mba hanokana andro iray hanatrehana manomboka amin'ny 12 ora maraina eo am-bavahadin'ny lapan'ny Amalienborg Square hankafizanao ny seho maimaimpoana omen'ny miaramilan'ny Royal Royal Guard isan'andro. Ny dia dia manomboka amin'ny Rosenborg Castle ary mifarana amin'ny Kianja Amalienborg, toerana misy ny ririnina misy ny fianakavian'ny mpanjaka Danoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Copenhague » Fikasana maimaimpoana hatao any Copenhagen